OnePlus Nord N10 5G iyo Nord N100: muuqaalada, qiimaha iyo inbadan | Androidsis
OnePlus Nord N10 5G iyo Nord N100: labada mobiles ee cusub ee raqiiska ah ayaa hadda rasmi ah
Saadaasha ayaa ugu dambeyntii la dhammaystiray. OnePlus hadda waxay ku soo laabatay daah fur cusub, ama labo, halkii, maadaama ay hadda leedahay laba boosteejo oo horay loo sheegay oo lagu soo dallacay OnePlus Nord N10 5G iyo Nord N100, kuwaas oo loogu talagalay kala duwanaanta soo gelinta iyo bartamaha, siday u kala horreeyaan.
Labadan mobiles waxay yimaadeen iyagoo qayb ka ah istiraatiijiyadda cusub ee soo saaraha Shiinaha uu bilaabay inuu ku hirgeliyo wixii horay loo ogaa ee asalka ahaa OnePlus North, terminaalka la bilaabay bishii Luulyo oo ka mid ah faa'iidooyinka dhexdhexaadka ah. Dabcan, waxay leeyihiin astaamo farsamo oo xiiso leh iyo qeexitaanno, laba ka mid ah (oo kaliya khuseeya Nord N10 5G) waa 90 Hz heerka cusbooneysiinta ee gudigiisa iyo processor-ka Snapdragon 690. Hadda waxaan sii wadnaa faahfaahinta tayada si qoto dheer labada nooc.
1 Astaamaha iyo tilmaamaha farsamo ee OnePlus Nord N10 5G iyo Nord N100
1.1 Xaashiyaha farsamada
Astaamaha iyo tilmaamaha farsamo ee OnePlus Nord N10 5G iyo Nord N100
Waxaan ku bilaabi doonnaa ka hadalka Nord N10 5G. Moobaylkani waa midka ugu dhow midka hore loo yaqaan 'OnePlus Nord', Una soo bandhigin farqiga noocan oo kale ah marka loo eego shaashadda iyo waxqabadka.
Qalabka guddigaani waa teknolojiyadda IPS LCD, wax la fahamsan yahay soo saarista arrimaha dhimista miisaaniyadda. Si kastaba ha noqotee, si aan looga dhigin mid duug ah, shirkaddu way ku deeqday heerka cusbooneysiinta ee 90 Hz. Sawirka shaashadda wuxuu ku saabsan yahay 6.49 inji, xalkiisuna wuxuu u eg yahay FullHD + oo ah 2.400 x 1.080 pixels, si loogu bixiyo qaab muuqaal ah 20: 9. Tan, marka lagu daro haysashada Corning Gorilla Glass 3 oo ilaalin ah, waxaa jira dalool ku yaal geeska bidix ee sare oo ay ku yaalliin kamaradda hore ee 16 MP oo leh f / 2.1 aperture.
Nidaamka kamaradda gadaal ee Nord N10 5G waa afar laab oo inta badan ka kooban toogasho 64 MP ah oo leh f / 1.8 aperture, kaas oo lagu lammaaneeyo muraayadaha 8 MP-ga-ballaadhan oo leh aragti dherer ah oo ah 119-degree, a 5 MP sensor for blur effect, iyo 2 MP macro oo loogu talagalay sawirro dhow.
Chipset Snapdragon 690, taas oo ah sideed-xuddun kuna shaqeysa ugu badnaan saacadda oo ah 2.0 GHz, waxay ku hoos jirtaa daboolka taleefankan casriga ah. Waxa kale oo jira 6GB RAM iyo 128GB meel kaydinta gudaha ah.
Batariga uu sido waa 4.300 Mah Mah iyo iyo wuxuu la yimaadaa 30W lacag deg deg ah. Astaamaha kale ee kaladuwan waxaa ka mid ah akhristaha faraha gadaal, Android 10 oo leh OxygenOS 10.5, UCB-C, iyo 5G isku xirnaanta.
Iyadoo la tixgelinayo OnePlus Nord N100, shaashaddeeda sidoo kale waa IPS LCD, laakiin 6.52 inji oo wata 60 Hz heer cusbooneysiin ah iyo HD + qaraar dhan 1.600 x 720 pixels (20: 9). Gorilla Glass 3 sidoo kale waa la joogaa, iyo sidoo kale dalool ku yaal geeska bidix ee sare si loo xakameeyo kamaradda hore, taas oo kiiskan uu yahay 8 MP oo leh f / 2.0 aperture. Kaamirada gadaal ee sedexda ah waxay leedahay 13 MP (f / 2.2) toogashada weyn iyo labo kale oo 2 XNUMX ah oo loogu talagalay sawiro leh saameyn muuqaal iyo muuqaal ah.
SoC ee OnePlus Nord N100 uu leeyahay waa Qualcomm Snapdragon 460, mid dhamaad-hoose ah oo ka shaqeeya ugu badnaan xaddiga 1.8 GHz. Qaybtani waxay la timid xusuusta 4 GB RAM iyo 64 GB meel kaydinta gudaha ah. Batariga awood u siiya, dhanka kale, wuxuu leeyahay awood 5.000 Mah ah wuxuuna la socdaa 18 W oo degdeg ah.
Sidoo kale waxaa jira akhristaha faraha gadaal iyo USB-C dekedda taleefankan, iyo sidoo kale Android 10 OS oo leh OxygenOS 10.5.
HAL -KAALIN NORD N100
MUUQAAL 6.49-inji 2.400 x 1.080p (20: 9) / 90 Hz FullHD + IPS LCD 6.52-inji HD + 1.600 x 720p (20: 9) / 60 Hz IPS LCD
PRORESOR Snapdragon 690 Snapdragon 460
GOOBKA BADBAADADA GUDAHA 128 GB lagu ballaarin karo microSD 64 GB lagu ballaarin karo microSD
KAAMARKA DAR Afaraad 64 MP oo leh f / 1.8 aperture + 8 MP xagal ballaadhan oo leh f / 2.3 aperture + 2 MP macro oo leh f / 2.4 aperture + 5 MP oo ah sawirka sawirka f / 2.4 Saddex: 13 MP oo leh f / 2.2 aperture + 2 MP makro oo leh f / 2.4 aperture + 2 MP qaab sawir leh f / 2.4
CAMERA HORE 16 Xildhibaan (f / 2.1) 8 Xildhibaan (f / 2.0)
BATARY 4.300 mAh oo leh 30 W lacag degdeg ah 5.000 mAh oo leh 18 W lacag degdeg ah
NIDAAMKA HAWLGALKA Android 10 hoosta OxygenOS 10.5 Android 10 hoosta OxygenOS 10.5
MUUQAALO KALE Akhriska Sawirka Faraha / Aqoonsiga Wajiga / USB-C / 5G Isku xirnaanta Sawirka faraha gadaal / Aqoonsiga wajiga / USB-C
Qiyaasaha iyo Miisaanka 163 x 74.7 x 9 mm iyo 190 garaam 164.9 x 75.1 x 8.5 mm iyo 188 garaam
Labadaba waxaa loo heli doonaa iibsasho laga bilaabo dhammaadka Nofeembar. OnePlus Nord N10 5G waxaa lagu dhawaaqay qiimo dhan 349 euro, halka Nord N100 si rasmi ah looga dhigay qiimo dhan 199 euro. Midka hore wuxuu ku yimaadaa madow (Midnight Ice) kan labaadna midabkiisu cawlan yahay (Midnight Frost).
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » OnePlus Nord N10 5G iyo Nord N100: labada mobiles ee cusub ee raqiiska ah ayaa hadda rasmi ah
Sida marwalba loogu soo bandhigo fiidiyowyo shaashad buuxda YouTube-ka